Cunto xumada oo la ogaaday in ay tahay dillaaga ugu weyn (Daraasad) - Aayaha
Home»CAAFIMAADKA»Cunto xumada oo la ogaaday in ay tahay dillaaga ugu weyn (Daraasad)
Waxyaabaha farta lagu fiiqay ayaa waxaa ka mid ah cusbada,, haddii rooti lagu cuno ama suugo ama cuntooyinka lagu kariyo – waxay waxyeelo u geysanaysaa qofka caafimaad ahaan haddii aanan laga taxadarin.
Prof Murray ayaa tiri ” Jabaan waa waddan aad cajiib u ah 30-40 sano kahor waxay ahaayeen sida shiinaha oo kale waxayna aad u isticmaali jireen cusbada , laakiin hadda way iska yareeyeen. Wali waa dhibaatada ugu badan ay wajahaan laakiin sidii ay ahaan jirtay hada maahan oo hadda hoos ayay u dhacday.
“Tayada cunta aad cunayso waa muhiin markasta iyadoon loo fiirinaynin miisaankada”. Prof Murray ayaa sidaa tiri.
Laakiin lacagta ayaa iyaduna mushkilad kale ah: